Amagama eengelosi aMakhwenkwe kunye naMantombazana - Amagama Abantwana
Amagama eengelosi aMakhwenkwe kunye naMantombazana
Kubazali abaninzi abatsha, umntwana wabo ozayo sisipho esivela kuThixo okanye emazulwini. Zininzi iingelosi ezicacileyoamagama amakhwenkwe namantombazana avela kwisibhaloIinkqubo ezahlukeneyo zeenkolelo, kodwa kukwakho namagama angaqhelekanga wasezulwini onokuthi ukhethe.
Amagama amaninzi aqhelekileyo kunye aqhelekanga ngegama Angel
Ukuba ufuna igama leengelosi lomntwana wakho, eyona ndawo ilula yokufumana inkuthazo ngamagama athetha ukuba 'ingelosi.' Khangela okwahlukileyo kwigama okanye uguqulelo olusuka kwiilwimi ezahlukeneyo ukufumana okungakumbiigama elahlukileyoyeyakho encinci. Angel ukuhambelana namanye amagama''Angel uvavanyo lokuhambelana kwegama kunye negama.
UAnahera (owasetyhini) -Igama lesiMaori elithetha 'ingelosi' libize aa-Naa-HHEH-Raa
UDeva (owasetyhini) -Umntu osezulwini eBuddhism naseHindi wabhengeza dey-vuh
U-Engel (Masculine) -Ukuqala unxulunyaniswa nesizwe samaJamani oku kamva kwadityaniswa negama elithi 'ingelosi'
UFereshteh (owasetyhini) -Igama lesiPersi elithi 'ingelosi' libize u-f-eh-r-eh-sh-T-eh
IGotzon (eyindoda) -Igama lesiBasque elithetha 'ingelosi' ibhengezwe kwiGAATSihN
UMalak (Isini esingathathi hlangothi) -Igama lesiArabhu elithi 'ingelosi' libize ma-LAK
128 Amagama amahle abantwana aseHawaii
100+ Amagama amantombazana angamaKorea aKhethekileyo kunye aQhelekileyo
Amagama angama-120 abantwana basePhilippines
Ukusuka kwibhayibhile ukuya kwixesha elitsha leengelosi, kukho ingelosi ezininzi ezaziwayo kwiinkqubo ezahlukeneyo zeenkolelo. Abanye banokuphikisa ngelithi iingelosi azange zibabhalele abantu besini kuba bezingenzelwanga ukuzala njengabantu. Cinga ngenkolelo yakho kunye neminqweno yakho kumntwana wakho emva koko ukhethe ingelosi efanelekileyo kwezi mpawu.
Amagama eNgelosi angamadoda
Kwimibhalo emininzi yakudala, zimbalwa kuphela iingelosi ezingamadoda ezichongiweyo.
Chamuel - Lowo ubona uThixo; enye yeengelosi ezisixhenxe zebhayibhile
UGabriyeli - uThixo ungamandla am; ingelosi enkulu eyazisa ukuzalwa kukaYesu
UMikayeli - Ngubani na ofana noThixo; enye yeengelosi ezisixhenxe zebhayibhile
Mihangel - Ingelosi efana noThixo; Igama lesi-Welsh isiphatha-zingelosi uMikayeli
URafael - uThixo uphilisile; enye yeengelosi ezisixhenxe zebhayibhile
Ubabalo-Inceba kaThixo; enye yeengelosi ezisixhenxe zebhayibhile
U-Uriyeli - uThixo kukukhanya kwam; Ingelosi eyintloko engumHebhere olumkisa uNowa ngomkhukula ozayo
Amagama eengelosi zabafazi
Namhlanje, abantu abaninzi bacinga iingelosi njengabafazi nangona bebehlala bebonakaliswa njengamadoda kwimbali yamandulo.
UAnaita -Angel; enye yeengelosi eziphezulu kakhulu kwiZoroastrianism
UBarbelo - Onamandla ngoThixo; Ingelosi yokulunga kwingelosi eyaziwayo
UDina - ugwetyelwe; kwathiwa yingelosi eyafundisa abantu ukuthetha
U-Eloa-Lowo ubuza imibuzo; kwathiwa yingelosi ezelwe ziinyembezi zikaYesu
UJophiel - Ubuhle bukaThixo; Ingelosi eyagxotha uAdam noEva e-Eden
Muriel - Ulwandle olukhanyayo; Ingelosi ehlala ngaphaya komqondiso weenkwenkwezi Umhlaza
Isini esingathath'icala Amagama eNgelosi
Ezinye iingelosi ziboniswa njenge-androgynous okanye amagama abo atshintshe ukuthandwa phakathi kwabantu besini ekuhambeni kwexesha.
IAriyeli - Ingonyama / ingonyama kaThixo kaThixo; enye yeengelosi ezisixhenxe zebhayibhile
UCassiel - Isantya sikaThixo; enye yeengelosi ezisixhenxe zebhayibhile
Malaika - Ingelosi; kwi-Islam inoxanduva lokuhambisa imiyalezo ku-Allah / kuThixo
Sariel - Umyalelo kaThixo; enye yeengelosi ezisixhenxe zebhayibhile
I-Seraphim - Ezo zivuthayo; osondeleyo kuThixo
Amagama anxulumene namazulu
Iingelosi zihlala kucingelwa ukuba zihlala ezulwini, ke igama lasezulwini linokuba yenye indlela yokuhlola. Cinga ngamagama ahambelana neengelosi, izulu, okanye oko kuthetha ukuba ezulwini usebenzise igama lomntwana wakho.
Amagama aMazulu amaKhwenkwe
Izulu libizwa ngamagama ahlukeneyo kwiinkcubeko ezahlukeneyo kwaye uninzi lala magama aneemvakalelo zobudoda.
IAgelos -Igama lesiGrikeIntsingiselo 'yomthunywa'
I-Celio - igama lesiTaliyane neSpanish lezulu
Haniel -Igama lesiHebhere elithetha 'isipho sikaThixo'
UNathaniel - 'Isipho esivela ezulwini' ngesiGrike
U-Osca - 'Umlo wasezulwini kaThixo' eScandinavia
I-Riyon - igama laseIndiya elithetha 'ubuhle obukhulu bezulu' libize i-ree yon
Inguqulelo eyiNgcwele - yesiFrentshi yegama lesiLatin elithi 'ngcwele'
IZiyon -Indawo ahlala kuyo uThixo okanye 'indawo ephezulu' ngesiHebhere
Amagama asezulwini aMantombazana
Amagama ahambelana nezulu ahlala ethatha isandi sobufazi.
UCeleste - uhlobo lwesiFrentshi lwesiLatin 'kulowo wazalelwa ezulwini njengengelosi'
I-Ciela -Igama lesi-Esperanto 'lasezulwini' libizwa ngokuba yi-chee-E-la
UDiana-Evela kwiingcambu zase-Indo-zaseYurophu kuthetha ukuba 'zezulu'
EkaThixo-ivela ku-Hebrew 'Yintanda'
Ezulwini-Igama legama elithetha indawo ahlala kuyo uThixo neengelosi
Inceba - isiNgesi igama elithetha 'uvelwano'
INevaeh - Igama 'izulu' lipelwe ngasemva; Ndibize nuh vAI uh
I-Ourania- 'yaseZulwini' ngesiGrike yabiza oo raa nEE aa
USerene - igama lesiLatini elithetha 'ukuthula'
Isini Amagama aseZulwini aThath'icala
Kwezinye iinkcubeko, amagama ahambelana nezulu awagqitywanga njengendoda okanye ubufazi.
U-Akachi-Igbo, igama lase Ntshona Afrika elithetha 'isandla sikaThixo' sibize aa kaa chee
IKerubhi - ukuba kufutshane; uluhlu oluphezulu lweengelosi
I-Elysium -Indawo ahlala kuyo uThixo
I-Ethereal - ukukhanya, umoya, izulu
IHalo - Idiski ekhanyayo yegolide; inxulunyaniswa nento yentloko enxitywe ziingelosi
UKamalani - 'umntwana wasezulwini' ngesiHawaii; ebizwa ka ma ˈla ni
Leilani - 'Iintyatyambo zezulu' ngesiHawaii; Kubizwe uLay-lah-nee
Amagama anentsingiselo yokomoya
Kwezinye iinkcubeko kunye neenkqubo zeenkolelo, uguqulo lwengelosi ngumoya. Ukuba ujongeigama lenkwenkwe elomeleleyookanye igama eliyintombazana elinentsingiselo elingokomoya kunelasezulwini, ezi zikhetho ezintle.
Imamu (Masculine) -IsiSwahili 'inkokeli yokomoya' ibize u-I-mamu
Isrāfīl (Masculine) - Ingelosi enkulu yamaSilamsi ovuthela ixilongo ukwazisa uMhla woVuko; ndibize Iz ruh fl
I-Kachina (Isini esingathathi hlangothi) -Igama le-Pueblo leqela elingaphezulu kwama-500 omoya ovakalayo obizwa kuh-chee-nuh
UMoroni (Isini esingathathi hlangothi) -Ingelosi evela kwiimfundiso zikaMormon ibhengeze imō-rō´nī
Umoya (Isini esingathathi hlangothi) -Umgaqo wobomi ebantwini ofakwe sisithixo
Tien (Ubufazi) -Igama laseVietnam elithetha 'ingelosi, intsomi, okanye umoya' wabiza tiən
Amagama eengelosi ezimnyama
IBhayibhile ichaza iingelosi eziwileyo kunye nembali, ezinye iingelosi kunye nabantu basezulwini bafikelele kwinqanaba elibi. Kwabanye, iingelosi ezimnyama ziyimpembelelo enkuluamagama osana angama-gothicNgelixa abanye bejonga kubo njengommeli wokwenene woluntu onokulungileyo nokubi ngaphakathi.
UAbhaddon (Masculine) -Igama lesiHebhere lengelosi ebonakala ingumlawuli wemimoya engendawo; NgesiGrike igama lakhe nguApoliyon
I-Azrael (Isini esingathath'icala) -Nceda uThixo; enye yeengelosi eziphambili ezisixhenxe zebhayibhile zihlala zibizwa ngokuba 'yingelosi yokufa'
I-Daimones (isini esingathath'icala) -Igama lesiGrike elithetha 'izidalwa zikaThixo;' ingcambu yegama 'iidemon' libize u-īdī-mə-ˌnēz
UJinni (Isini esingathathi hlangothi) -Mimoya kwiintsomi zaseArabhu ezingaphantsi kweengelosi needemon kwaye bonwabela ukohlwaya abantu
Lusifa (Indoda) - umphathi wokukhanya; Igama lokuqala lengelosi ephezulu eyaphoswa phantsi ngenxa yendlala yayo yamandla
USathana (Masculine) - Ingelosi ewile
UXaphania (owasetyhini) -Inkokeli yeengelosi ezivukelayo Izinto zakhe eziMnyama trilogy ibizwe ngokuba nguZa- fan- ee- a
UZera (owasetyhini) - Ingelosi yempambano yokubulala ingelosi evela kwihlaya Ukuzalisa
Isipho saseZulwini soMntwana
Ukukhetha igama lomntwana wakhoYingelosi leyo ibonisa uthando lwakho lomoya ococekileyo nolungileyo. Esinye sezona zipho zibalaseleyo onokuthi usinike umntwana wakho sisiqalo esihle ebomini kwaye siqala ngegama labo. Nokuba ujonga inkolo ethile okanye inkcubeko ye-pop, unokufumana ingelosi kunye namagama omoya akujikelezile. Khangela iiwebhusayithi ezinje Igamaberry kwaye Emva kwegama ukufumana intsingiselo kunye nembali yamagama abantwana basezulwini owathandayo.
Imeko Yendalo Esingqongileyo Tv, Music Ne Movies Iphunga Malunga Iindawo Zokuhlala Ne Memorials Ikati Ukufuya
uyisusa njani ipeyinti esekwe kwioyile kulusu
wenzeni ngeepeni zecanada
Kutheni unxibelelwano lubalulekile kubudlelwane
ungaxela njani ukuba inja yakho inengqele
yezandla kubantu abadala abanobuchule obulinganiselweyo
uyifumana njani ioyile kwikhonkrithi